किन आफ्नै विमानमा लैजान खोजेका थिए डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमलाई ? « Etajakhabar
किन आफ्नै विमानमा लैजान खोजेका थिए डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमलाई ?
दुई नेताबीच हनोइमा भएको शिखर वार्तापछि फर्कने क्रममा ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमलाई आफ्नो विमानबाट उत्तर कोरियामा लगिदिने प्रस्ताव गरेको बीबीसीले जनाएको छ । ‘ट्रम्प टेक अन द वर्ल्ड’ नामक डकुमेन्ट्रीलाई बीबीसीले जनाएअनुसार ट्रम्पले किमसमक्ष उक्त प्रस्ताव गरेपछि अमेरिकी कु ट नीति ज्ञहरुसमेत च कित भएका थिए ।
ट्रम्पको प्रस्ताव किमले स्वीकार गरेको भए उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिको विमान चढ्थे र ‘एअर फोर्स वन’ ले उत्तर कोरियाली हवाई मार्ग प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो । किमलाई उत्तर कोरियामा पु¥याउन गएर फर्कने क्रममा उत्तर कोरियाली हवाई क्षेत्रमा रहँदासम्म हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चु नौ तीलाई लिएर अमेरिकी सुरक्षा निकाय र कु ट नीतिज्ञहरु अ च म्मित बनेका थिए ।
तर किमले ट्रम्पको प्रस्ताव स्वीकार नगरेका कारण ठु लो त ना व टरेको अमेरिकी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । ट्रम्पको राष्ट्रिय सु्रक्षा परिषदका एसिया विशेषज्ञ म्याथ्यु पोटिंगरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार रेलमार्ग हुँदै हनोइ पुगेका किमलाई ट्रम्पले आफ्नो विमानबाट सँगै फर्कन प्रस्ताव गर्दै ‘म तपाईलाई दुई घण्टामै घर पु-याइदिन्छु’ भनेका थिए ।
रेलमार्ग हुँदै लामो यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले ट्रम्पले किमलाई विमानमै जाऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । पोटिंगरका अनुसार त्यतिबेला ट्रम्पले किमलाई आफ्नो नयाँ मित्रका रुपमा लिएका थिए । तर किमले ट्रम्पको सो प्रस्तावलाई अ स्वीकार गरेको उनले जानकारी दिए । यसअघि सिंगापुरमा भएको शिखर वार्तामा पनि ट्रम्पले किमलाई आफ्नो कारभित्रको झलक देखाएका थिए ।